Umhlaba ushisa ngokubomvu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umhlaba ushisa ngokubomvu
Isithombe - Imvelo ye-UN
Eminyakeni yamuva nje amagama athi ukuguquka kwesimo sezulu nokufudumala kwembulunga yonke yibona abahola phambili bezindaba. Yize kuyizinto ezake zenzeka phambilini futhi ezizophinda zenzeke ngokuzayo, okwenzekayo namuhla kuya ngokuya kuba kubi ngenxa yomthelela abantu abanawo emvelweni.
Isimo sibucayi kakhulu. Kusukela ngo-1880 kuya ku-2012, izinga lokushisa lomhlaba jikelele lenyuke ngo-0,85ºC, okuholele ekwehlisweni kobuso beqhwa ePoland kanye nokukhuphuka kolwandle.
Lokhu kuvame ukucatshangwa njengamazwi nje, noma izenzo ezikude kakhulu. Kepha iqiniso ukuthi kuyenzeka. Ukuphuma okuqhubekayo kwamagesi angcolisayo kusibeka engozini sonke. Futhi uma besidinga ubufakazi obengeziwe bokuthi lokhu kuyinto yangempela, U-Antti Lipponen, isazi semvelo eFinland Meteorological Institute, udale i- igrafu egqwayizayo lapho singabona khona ukuthi ukushisa komhlaba kushintshe kanjani emhlabeni jikelele.
Ekuqaleni, ungabona amabha aluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okotshani, kepha eminyakeni edlule izinga lokushisa lezwe ngalinye liyakhula futhi baqala ukungcolisa obomvu, kuze kube sekugcineni ngo-2016 yonke imigoqo ibomvu nephuzi ngokubomvu.
»Alikho izwe elivelele ngokusobala kugrafu. Ukufudumala kuyinto yomhlaba wonke, hhayi yendawo'ULimonnen utshele Isimo sezulu Esiphakathi. Futhi noma ngo-2010 ohulumeni bavuma ukuthi kuyadingeka ukunciphisa ukukhishwa kwemoya ukugwema ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile alikhuphuki ngaphezu kuka-2ºC, ngeshwa kubonakala sengathi iSivumelwano SaseParis ngeke sanele ukugwema imiphumela.
Kancane kancane, kancane kancane kodwa, iplanethi yoMhlaba iyafudumala. Eminyakeni ezayo kusenokwenzeka ukuthi amarekhodi azoqhubeka nokwephulwa, ngaphandle kwalapho isimo sishintsha kakhulu.
Ungabona igrafu lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umhlaba ushisa ngokubomvu
AmaJet Giant ahehayo asanda kubhaliswa eHawaii
Abangama-89% baseSpain banokushintsha kwesimo sezulu njengenkinga yokuqala